Arrin layaab leh oo dhex martay Wasiirka Amniga iyo Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Arrin layaab leh oo dhex martay Wasiirka Amniga iyo Farmaajo
Wuxuu ka mid ahaa 15 xildhibaan oo Kooxda Farmaajo ka hor istaageen xarunta Golaha Shacabka, waxaana lagu xasuustaa doorkii uu ka ciyaaray dadaalkii dalka looga badbaadiyay gacan kali-talis, iyo garab istaaggiisii Ciidankii Badbaadada Qaranka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wasiirka Amniga Soomaaliya, Cabdullahi Maxamed Nuur, oo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, uu xalay u magacaabay xilkaas, ayaa hore uga sheekeeyay dhacdooyin layaab leh oo dhex maray isaga iyo Madaxweynihii muddadu ka dhamaatay Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Wasiir Cabdullahi, wuxuu sheegay inuu shan mar la kulmay Farmaajo tan iyo markii uu xilka Madaxweynaha Soomaaliya ku guuleystay bishii Febaraayo 2017-kii, isla-markaana uu kulan kasta oo dhex maray labadooda uu ka diiwaan galiyay hadallo anfariir iyo wax lala yaabo ah.
Wuxuu xusay in Farmaajo uu kula kulmay dalka Jabuuti, xilli ay ka wada qeyb galayeen, daah-furka mid ka mid ah dekadaha dalkaas, isla-markaana ay dood dheer oo ku saabsan xaaladaha dalka ay dhex martay, taas oo ugu danbeyn sababtay in Farmaajo uu si cad u sheego in Muqdisho ay ka dumeyso Hawiye, haddii dagaallo dhacaan.
“Waxaan ku iri, Madaxweyne, waddada aad ku socoto oo hadda dowladnimadeennu saaran tahay mid doorasho na gaarsiineysa ma’aha, ee waa waddo sababeysa in Soomaalidu mar kale Carta ku laabtaan” Ayuu yiri Xildhibaan Cabdullahi.
“Wuxuu igu yiri, waxaad u digdig leedihiin dagaal iyo colaad, laakiin adinka ayay daarahaan idinka dumayaan dhaqaaluhuna idinka burburayaan, ma uusan qarsan oo adinka wuxuu ula jeedaa Hawiye”. Ayuu sidoo kale kale Wasiirka Cusub ee Amniga.
Wuxuu intaas ku daray, in Farmaajo uu si cad ugu dooday in uu heli karo askar ka soo jeedda beesha Hawiye ee Caasimadda deggan, kuwaas oo isaga u dagaallama Muqdishana burburiya, si la mid ah, kuwa u dagaallama Kooxda xiriirka la leh Al-qaacida ee Al-Shabaab.
Wasiirka cusub ee Amniga, wuxuu Dowladdii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ka soo noqday Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya, wuxuuna Baarlamaankii 10-aad JFS, gaar ahaan Golaha shacabka ka soo galay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle.
Wuxuu soo noqday xog-hayihii Guddiga Maaliyadda ee Baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya, wuxuuna hormuud u ahaa, Xildhibaannadii soo bandhigay warbixintii musuqmaasuqa iyo wax is-daba-marinta ee ay ku kaceen Wasaarada Maaliyadda iyo Hay’addaha kale Dowladda, sanadkii 2018.
Waa ganacsade iyo milkiilaha Elite Hotel, waana shaqsi gal-gal badan, deggan, isla-markaana afartii sano ee la soo dhaafay si weyn ugu fara-adeygay in Kooxda Farmaajo, laga horeeyo dalka inta uu waqtigoodu ka dhamaanayay.